Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Gwenaëlle Lefeuvre · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana Filankevi-Pitantanana GV 2017 : Gwenaëlle Lefeuvre
Nandika (fr) i Nadine Mondestin
Voadika ny 13 Marsa 2017 2:14 GMT
(Fanamarihana: ity andianà lahatsoratra ity dia miresaka ireo mpirotsaka an-tsitrapo avy amin'ny tranonkala samihafa ato amin'ny Global Voices, nantsoina hanendry izay ho solontenan-dry zareo mandritry ny 2 taona ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny fikambanana)
Gwenaëlle no anarako, afohezina hoe Gwen, avy ao Eoropa. Mirotsaka hofidiana ho solontenan'ireo mpirotsaka antsitrapo aho amin'io fifidianana ho avy io.
Raha ny dingana efa nodiaviko dia tsy nitondra ahy avy hatrany ho amin'ny làlan'ny fiasàna ho an'ny GV, saingy inty aho ! Nianatra ny fizika aho tao Paris, avy eo niasa nandritry ny 9 taona tamin'ny fikarohana teny amin'ny oniversite, mandra-pahatsiarovako tena hoe vonona ho amin-javatra hafa aho. 4 taona aho izao no miasa aminà orinasa mpanamboatra singa elektronika “semi-conducteurs”. Ka raha izany… fomba ahoana no nahatonga ahy ato amin'ny GV ? Tena kisendrasendra mihitsy : nanomboka tamin'ny fitiavako tenim-pirenena sy kolontsaina, ary ny filàko mitahiry ny teny frantsay fampiasako mba hisosa tsara sy ho araka ny tena izy. Hitanareo, 11 taona no nandaozako an'i Frantsa, saingy ny fiteniko no maneho tsara indrindra ny maha-izaho ahy, ary tsy tiako ho very izy io. Nanomboka nandika lahatsoratry ny GV ho amin'ny teny frantsay aho, telo taona katroka izao ary nandray anjara bebe kokoa hatrany arakaraky ny nandehanan'ny fotoana. Hatramin'ny taona lasa, nanampy ihany koa an'i Suzanne Lehn sy Claire Ulrich, mpamoaka lahatsoratry ny Lingua, niaraka tamin'ny dingan'ny zana-panitsiana sy famoahana lahatsoratra.
Nanokatra varavarana vaovao maro ho ahy ny fiasàna ho an'ny GV, na io niaraka tamin'ny vondrom-piarahamonina, na ny lohahevitr'ireo lahatsoratra. Izay nataoko niaraka taminareo dia nanefy ahy ho olona mendrika eto anivon'izao tontolo izao satria nanampy ahy hirotsaka bebe kokoa hatrany taminà tetikasa maro samihafa ireny. Noho ny asako, miezaka mandresy lahatra ireo zanako vavy aho hoe azon'izy ireo atao ny manohy miasa amin'ny sehatra siantifika na teknika ihany koa, fa tsy natao ho an'ny zazalahy irery. Niteny taminà sehatra sy hetsika maro samihafa aho tany Atsimo-Atsinanan'i Angletera sady niandraikitra ireo tovovavy mpianatra sy ankizivavy iray avy amin'ny SEPnet ary ny Girls Network (Tambajotran'Ankizivavy) : ny fanabeazana voaraiko dia tokony koa ho safidy natoraly ho an'ireo ankizivavy, izay sokajy efa nisy ahy.
Ankoatra izany, ny Rising Voices sy hetsika ara-pianakaviana iray no nahatsapako hoe hatraiza ny fanaovan'ny olona tsinontsinona ireo mpampiasa ny fiteny vitsy an'isa. Ankehitriny amin'izao izaho monina an-tany hafa izao no ahatsapako ny ahy, fantatro tsara mihitsy hoe ny fandavan'ny olona iray tsy hanome fanajàna ny teniny dia fandàvana amin'ny ampahany ny faran'izay kely indrindra sy manokana amin'ny maha-izy azy. Niarahako nanangana ny fikambanana iray ho fampiroborobona sy famoahana ireo antontan-kevitra amin'ny iray amin'ireny tenim-pirenena ireny, ary izaho no mitantana ny kaontinay ao amin'ny Twitter (@AcademieDuGallo). Mety efa nahita ireo sary mahatsikaiky noforoninay ho an'ny Fanambin'ny sary mahatsikaiky atao amin'ny tenin-dreny, niarahana nikarakara tamin'ny Rising Voices, ny sasany taminareo, ka mpiara-miasa taminìizany ny fikambanana misy anay.
Anisan'ireo zavatra tiako ho tanterahana raha lany aho ny :
hitady fomba tsara kokoa hanasongadinana ireo votoaty orizinaly ao amin'ireo tranonkalan'ny Lingua.
Koa ankehitriny ny GV efa misy amin'ireo teny lehibe manerantany (ary mitohy hatrany!), dia ny hanitatra ny Lingua ho any amin'ireo teny vitsy mpampiasa. Ohatra, ato anatin'ny taona vitsy hoavy i Eoropa dia hiatrika ny hetsika iray ho an'ny fahateraham-baovaon'ny fireharehàna amin'ireo fitenin'ny faritra ampiasain'ny terataniny. Ny GV no mety ho anisan'ireo media iraisampirenena voalohany hanome feo azy ireny.
Hanao izay hampahalaza antsika ! Tsy nahita ny GV aho raha tsy fony aho nitady ny fomba hahafahako manao asa fandikàna antsitrapo. Raha tsy izaho no nilaza tamin'izy ireo ny momba antsika, tsy mbola nisy nandre ny momba ny Global Voices, na ny fianakaviako, na ny faribolan'ireo namako na mpiaramiasa (tany aminà firenena tsy latsaky ny valo), olona samy voaofana tsara ara-drariny sy ara-politika. Tsy azo ekena izany. ireo mpirotsaka antsitrapo rehetra, mila mahafantatra ny asa ataontsika izao tontolo izao.
Saingy ireo dia vitsivitsy ihany avy amin'ireo hevitro, ary ny tena manandanja indrindra dia ny fiarahantsika mientana : vondrom-piarahamonina tsy mandrimandry isika, mangotraka ara-kevitra, lohahevitra, fanontaniana, ary mahafinaritra sy manintona ny hijery izany. Tena zavatra goavana ny hahalalàn'ireo mpirotsaka antsitrapo hoe azon'izy ireo zaraina izy ireny, ary azony atao ny mandray anjara amin'ny fanefena ny fivoaran'ny GV. Izany no anjara asa tazonin'ireo solontena roa avy amin'ny mpirotsaka antsitrapo, ary antenaiko ho lasa izany feo izany aho: ny feonareo.
Nahazo fianarana betsaka ary nandray betsaka avy amin'ny rehetra ato anatin'ny Global Voices aho, hatramin'ny andro voalohany nanombohako niasa niaraka taminareo, ary tena mankasitraka anareo tamin'ny zavatra rehetra, fa tonga ankehitriny ny fotoana, ho ahy, hanehoako ny fankasitrahako amin'ny fomba iray mitondra famoronana kokoa sy mamaly babena ny vondrom-piarahamonintsika.
Atombohy ny fifampiresahana, apetraho ao anaty faritra natao ho an'ny fanehoankevitra ny fanontaniana tianareo hapetraka amiko, na amin'ny imailaka na Twitter.
Misaotra nanokana fotoana hamakiana !
Ampisao ny fomba fifandraisana amiko, na amin'ny Twitter : @DiffractedWord
Afrika Mainty 22 Mey 2022